mirzmir Metro နာရီ - mirzmir Metro သည်မြို့တွင်း၌မြေအောက်၊ မြေအောက်နှင့်မြေအောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ကျယ်ပြန့်သောမီးရထားလမ်းကွန်ယက်ရှိသောİzmir၊ [ပို ... ]
Bursa ရထားဘူတာရှိပါသလား? မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းအခမ်းအနားကို 2012 တွင်ကျင်းပစဉ် Bursa တွင်2ရထားဘူတာတစ်ခု၊ Balat ရှိနှင့်Gürsuရှိရထားဘူတာတစ်ခုအားကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်။ နောက်ဆုံး [ပို ... ]
Bursa သို့အဘယ်အရာကိုရထား; ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ... တူရကီ Grand National Assembly ၏ဘတ်ဂျက်အစီအစဉ်သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ဘတ်ဂျက်ကိုဆွေးနွေးနေသည်။ GOOD ပါတီ၏ဒုတိယဥက္ကchairman္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကchairman္ဌမှာပါမောက္ခဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ mailsmail Tatlıoğlu2၏ဒုတိယ ၀ န်ကြီးအား Bursa တွင်ပြုလုပ်သောyapılanကိုမေးမြန်းခဲ့သည် [ပို ... ]
ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သည်အတိုင်းရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်များအား Istanbul သို့မဟုတ် Ankara သို့ Balikkesir နှင့် Balikesir နိုင်ငံရေးသမားများမှမြို့တော်ဝန်များက Ankara သို့လာရောက်ခဲ့ကြပြီး Leri Çanakkaleနှင့်Balıkesirနိုင်ငံရေးသမားများသည် Ankara သို့သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးပြောင်းလဲသွားသောBandırmaလိုင်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင်ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ …ဒီမှာလတ်တလော Anatolia ဒေသရှိစက်မှုထုတ်လုပ်မှု၏ရည်မှန်းချက်ကိုရထားလမ်းဖြင့်ရထားလမ်းဖြင့်ရောက်ရှိရန် Bursa အတွက်လည်းရည်ရွယ်သည်။ [ပို ... ]
ပြင်ပချေးငွေဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မည့် Bursa မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်း
Bursa မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းကိုပြင်ပချေးငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်။ Bursa-Yenişehir-Osmaneli မီးရထားလမ်းတွင်အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသည်။ Bursa-Yenişehirလိုင်း၏ပထမအဆင့်၏အခြေခံအဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများသည် 70 ရာခိုင်နှုန်းသို့ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုဖြစ်သော်လည်းအလုပ်၏အနည်းငယ်အချက်များ၊ [ပို ... ]
TCDD ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာ Ali İhsan Uygun, လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ပူးတွဲပါကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် Ankara Sivas အမြန်ရထားရထားလိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာတွေ့ရှိသည်။ တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်များအကြောင်းကုမ္ပဏီ ssan Uygun [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemsနာများကိုတိကျစွာဖြေရှင်းရန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြစီမံကိန်း ၀ န်ကြီး Murat Kurum နှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် 27 နှင့်ထို့နောက် 175 မော်တော်ယာဉ်များကို ၀ ယ်ယူပြီးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်များအားကောင်းလာလိမ့်မည်။ [ပို ... ]
Eskişehirမြို့တော်အမျိုးသမီး Parkomat အရာရှိမှလက်ခံလိမ့်မည်။ Eskişehir Metropolitan မြူနီစီပယ်က၎င်း၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များနှင့်မြှို့နယ်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်သူကိုအမျိုးသမီးမောင်းသူကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူအမျိုးသမီးဘတ်စ်ကားယာဉ်မောင်းအလုပ်ခန့်လိမ့်မည်ဟုမကြာသေးမီကကြေငြာခဲ့သည် [ပို ... ]
BUDO သည် Gemlik ဘတ်စကက်ဘောအသင်းအတွက်အမည်ပံ့ပိုးသူဖြစ်လာသည်
Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Bursa ပင်လယ်ပြင်ဘတ်စ်ကား (BUDO), တူရကီဘတ်စကက်ဘော 1 အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီBurulaş site ကို။ လိဂ်၌ရုန်းကန်ရသော Gemlik ဘတ်စကက်ဘောကလပ်၏အမည်ခံစပွန်ဆာဖြစ်လာခဲ့သည်။ Bursa, အပျော်တမ်းအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားကစားခန်းမများပေး [ပို ... ]
1973 နှစ်ပေါင်းကတည်းကအွန်လိုင်းဖူးနှင့်ပစ္စည်းများတည်ဆောက်ခြင်းဟာ Catalog ၏တစ်ခုတည်းသောပထမဦးဆုံးနှင့်အသစ်ပစ္စည်းများ catalog တည်ဆောက်နေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း tab မှာအလွန်အရေးကြီးသောကွာဟမှုဖြည်သည့်တူရကီ, ယခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပါ! ကျယ်ပြန့်ဆောက်လုပ်ရေး catalog [ပို ... ]
Ankara Batikent Metro မြေပုံလမ်းကြောင်းနှင့်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
Ankara Batıkent Metro မြေပုံလမ်းကြောင်းနှင့်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ - M1 BATIKENT METROS - Ankara ၏ပထမဆုံးမက်ထရိုကိုမတ်လ 29 တွင်စတင်ခဲ့သည်။ KızılayBatıkentလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်တည်ရှိသော 1993 မက်ထရိုလိုင်း [ပို ... ]
Ankara Kecioren မက်ထရိုမြေပုံလမ်းကြောင်းနှင့်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ
Ankara Keçiörenမြေအောက်မြေပုံလမ်းကြောင်းနှင့်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ M4 KEÇİÖREN METROSU - Kızılay Gazino လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိမက်ထရိုလိုင်းကို 15 ဇူလိုင် 2003 တွင်စတင်ခဲ့သည်။ Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်ဖြည့်စွက်နိုင်ဘူး, [ပို ... ]
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 8 ဒီဇင်ဘာ 1874 Agop Azarian ကုမ္ပဏီ
ယနေ့တွင် Belova-ဆိုဖီယာလိုင်း 8 လအတွင်းအပြီးသတ်ဖို့ကတိပြုထားပြီး suitors ၏ဆောက်လုပ်ရေးအဖြစ်သမိုင်းဒီဇင်ဘာလ 1874 12 Agop Azarian အဖှဲ့ဟာအတွက်။